कस्तो बन्छ एमाले माओवादीको नयाँ दल ? एकता घोषणा अघि के–के हुँदैछ ?
Tue, Nov 30, 2021 | 14:57:19 NST
Posted: Thursday, May 17, 2018 07:33 AM (4years ago )
काठमाडाैं, जेठ ३ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विहीबार पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बताएका छन् । यसका लागि विहीबार बिहान १० बजेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
समितिले एकताको औपचारिक निर्णय गर्ने दुवै दलले जनाएका छन् । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकतासम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसलाई समितिले अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
कस्तो बन्छ नयाँ दल
नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ।
नेतृत्व–केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले गर्ने । (ओली सरकारमा र प्रचण्ड पार्टीको संगठनमा बढी केन्द्रित हुने र पार्टीका निर्णयमा दुवै नेताको भूमिका बराबरी हुने समझदारी ) ।
चुनाव चिन्ह सूर्य ।
केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय (एमालेका २ सय ४१ र माओवादीका २ सय जना)
स्थायी समिति ४३ सदस्यीय (एमालेका २५ र माओवादीका १८ जना) ।
महाधिवेशन २ वर्षभित्र गर्ने ।
सरकारको नेतृत्व फेर्नेबारे तत्काल केही उल्लेख नगर्ने ।
मार्गदर्शक सिद्धान्त महाधिवेशनले टुंगो लगाउने तत्काललाई माक्र्सबाद–लेनिनबादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिने । जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादलाई महाधिवेशन हुँदासम्म बहसमा लैजाने ।
विहीबार एमालेको पुरानो कार्यालय रहेको ठाउँ बल्खुमा एमालेले आयोजना गर्ने मदन आश्रीत स्मृति सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागि हुने । एमाले माओवादी दुवै दलका कार्यकर्तालाई दुवै अध्यक्षले संबोधन गर्ने ।
एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने । एकताको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने ।
दुवै दलका केन्द्रिय समितिको बेग्लाबेग्लै बैठक बस्ने । बैठकले पार्टी एकता गर्ने र आ आफ्ना केन्द्रीय कमिटी भंग भएको एकै ब्यहोराको निर्णय गर्ने ।
पार्टी एकताबारेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने ।
पत्रकार सम्मेलन गरि औपचारिक निर्णय जानकारी गराइने ।